निर्वाचन विशेष : किसानलाई उत्पादन हेरेर अनुदान दीनुपर्छ रामपुर(पाल्पा) । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै गाउँ गाउँमा नेताहरु मतदातासँग भेटघाटमा व्यस्त हुन थालेका छन् । विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने सबैजसो उम्मेदवारको चुनावी नारा छ ।
काठमाडौंका बटुवाको नजरमा स्थानीय तह निर्वाचन काठमाडौं । काठमाडौंको न्युरोडमा भारीको खोजीमा नाम्लो बोकेर हिँड्दै गर्नुभएका ७३ वर्षीय ज्ञानबहादुर भण्डारीलाई पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको दोस्रोे स्थानीय तहको निर्वाचनले छोएको छ । धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा भण्डारी वैशाख ३० गते मतदानको दिन गाउँकै मतदान केन्द्रमा पुगेर भोट हाल्न आतुर हुनुहुन्छ । त्यसका लागि उहाँले आजैदेखि चाँजोपाँजो मिलाउन थाल्नुभएको छ ।
काँग्रेसमा टिकटको राजनीति स्थानीय तहको निर्वाचन अब हुन्छ नै । संवैधानिक र राजनीतिकरुपमा पो अब टर्नेवाला छैन । निर्वाचन हुने निश्चित भैसकेपछि राजनीतिक दलहरुभित्र टिकटको महत्वाकांक्षा राख्नेहरु जुर्मुराएका छन् । नेपाली काँग्रेस सत्तारुढ दल भएको हुनाले उसका दुईवटा प्राथमिकता हुन्छन् । एउटा, मुलुकभरी निर्वाचनका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वातावण बनाउने ।
घेदुङ संघीय महाधिवेशन : नयाँ सन्दर्भ, नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्व तामाङ समुदायको एकमात्र राष्ट्रिय साझा संस्था हो 'नेपाल तामाङ घेदुङ' । २०१३ सालमा स्थापना भएको घेदुङ नै तामाङ समुदायको सबैभन्दा जेठो संस्था हो । ६६ वर्षको जीवन व्यतित गर्दै गर्दा घेदुङले थुप्रै घुम्ती, मोड, आरोह–अवरोहहरु पार गरेको छ । तामाङ समाजको पहिचान, मूल्य–मान्यता, जीवन पद्धति, परम्परा, धर्म, कर्म, संस्कृति, भाषा, कला, भोषभूषाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासका लागि थुप्रै अभियानहरु संचालन गर्दै आएको छ ।
अब नागरिकले अत्यन्त सुझबुझका साथ प्रतिनिधि छान्नुपर्छ : वडाध्यक्ष नेपाल [भिडियो अन्तर्वार्ता] काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष जोगप्रसाद नेपाल सन् २०४५ देखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) काठमाडौं जिल्ला सचिवालय सदस्य, टोखा नगरपालिकाको संयोजकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ । राजनीतिको अलावा समाजसेवामा पनि सक्रिय नेपालसँग वडाध्यक्ष भएपछिका काम, वडामा भएका परिवर्तन, समस्या, चुनौती र अबको निर्वाचन तयारीलगायत विषयमा गरिएको कुराकानी ।
नेपाल तामाङ घेदुङको नवौं महाधिवेशनबाट भावी नेतृत्व र टीम कस्तो हुनुपर्छ ? नेपाल तामाङ घेदुङ तामाङ जातिको साझा र पुरानो सामाजिक संस्था हो । २०१३ सालमा स्थापित यो संस्थाले खासगरी तामाङ जातिको पहिचानलाई जोगाउने काम गर्दछ । यसको मुल उद्देश्य नै संसार भरीका तामाङहरुलाई एकता गर्दै संस्कृति, भाषा, धर्म, रितिरीवाज, भेषभुसा, कलालाई सम्बर्द्धन, संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्ने हो ।
मानसिक रोगको समयमै उपचार गरेमा जटिल रुप लिनबाट बच्न सकिन्छ [अन्तर्वार्ता] धेरैलाई मानसिक स्वास्थ्यबारे जानकारी नहुनसक्छ । तर स्वास्थ्यमा आउने धेरै समस्याहरुले मानसिक स्वास्थ्यमा पनि समस्या निम्त्याउने कारणमध्ये एक हो । मानसिक स्वास्थ्यमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षालाई खासै प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यका एकिन तथ्यांक नभए पनि संख्या बढ्दै गएको अनुमान विज्ञहरुको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सिन्धुली जिल्ला अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञबाट सेवा सुरु भएको छ ।
‘नचिन्नेले पनि गीत निर्देशन गरिदिनु भन्नुहुन्छ’ [अन्तर्वार्ता] पछिल्लो समय कल्चरल म्युजिक भिडियो निर्देशनका अब्बलमध्येका एक हुनुहुन्छ, दिप गुरुङ । गोरखा सिरानचोक गाउँपालिका २ मा जन्मी-हुर्केका उहाँ ६ वर्षदेखि निर्देशन पेसामा निरन्तर लागिराख्नुभएको छ । तर, उहाँले नृत्य निर्देशकको रुपमा कला क्षेत्र अँगाल्नुभएको भने दुई दशक नाघिसक्यो ।
भन्सार कार्यालय स्थापना भएकै दिन चोभारको सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आउँछ : कार्यकारी निर्देशक (अन्तर्वार्ता) काठमाडौं । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि सुख्खा बन्दरगाह एवं एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति स्थापना गरेको छ । दुई दशक अगाडि स्थापना भएको समितिले वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन तथा सहजीकरण क्षेत्रमा गैरभन्सारजन्य अवरोध न्यूनीकरण एवं व्यापारिक कारोबारजन्य समय र लागत कर्म गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
संस्कार, संस्कृति बुझाउन आफ्नै घरबाट सुरु गर्नुपर्छ [भिडियो अन्तर्वार्ता] कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका धम्पुसमा जन्मनुभएका मेजर खुशीमान गुरुङ (एमभिओ) ब्रिटिस गोर्खा सेनाबाट अवकाशपछि सामाजिक काममा सक्रिय हुनुहुन्छ । प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) पछि १८ वर्षमै ब्रिटिस गोर्खा सेनामा भर्ती हुनुभएका मेजर गुरुङले हङकङ, ब्रुनाइ, यूकेलगायत देशमा सेवा गर्नुभयो । साढे तीन दशकको सैनिक सेवाको अवकाशपछि उहाँ परिवारसहित बेलायतमा बस्दै आउनुभएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्य समस्या ‘ल्याण्डफिल साइट’ पोखरा । सन् २०१७ मा पर्यटकीय नगरी पोखरामा निर्माण शुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ जुलाई १० मा सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता थियो । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिएएमसिईले तोकिएको समय सीमाभन्दा ६ महिनाअघि निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै आए पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड -१९ का कारण विमानस्थल निर्माणको समय एक वर्ष थप गरी २०२२ जुलाई १० सम्म धकेलियो ।
क्युस्यु समिट-२०२२ को आवश्यकता र औचित्य सन् २०२०-२०२१ साल मानव जतिको इतिहासमा नै अत्यन्त दुखदायी र करुणामय वर्ष बन्न पुग्यो । अझ कति वर्ष यसले दु:ख दिने हो यसै भन्ने स्थिति छैन । गत दुई वर्षमा लाखौं मानिसहरुले ज्यान गुमाए, करोडौंले आफन्त गुमाए, अरबौंले रोजगार, पेसा व्यवसाय र सुख आनन्द गुमाए । अझै न त यसको अन्त्यको कुनै संकेत छ न यो नियन्त्रणमा नै आएको छ ।
पत्रकारले पनि समुदायलाई अघि बढाउने दायित्व हो भन्ने सोच्नु पर्छ : पाख्रिन [भिडियो अन्तर्वार्ता] विश्वको सबल मुलुक अमेरिकालाई बुझ्न र नजिकबाट हेर्ने रहर धेरैको हुन्छ । तर, सबैका ती मुलुकमा पाइला टेक्न पाउँछन् भन्ने हुँदैन । तर, लामो समय ट्रेकिङ र सञ्चारजगतमा खारिनुभएका सोलुखुम्बुका ङिमा पाख्रिन लामा धनी अमेरिकामा बस्दै आउनुभएको छ । तामाङ समाज उत्तर अमेरिकाका मिडिया संयोजक पाख्रिन तामाङ संस्कार, संस्कृति र समुदायको उन्नतिका निम्ति लागीराख्नुभएको छ ।
समुदायलाई आवश्यक परेको बेला नेपाल फर्केर अधिकारका लागि लड्छु : अध्यक्ष लामा अमेरिकामा तामाङ समुदायको संख्या बढ्दै जाँदा सम्बन्धित संघ/संस्थाहरु स्थापनाले पनि तीव्रता पाइरहेका छन् । ती संस्थाहरुले समुदायमा आफ्नो भाषा संस्कार, संस्कृतिदेखि नयाँ प्रविधि र परिस्थितिसँग प्रतिस्पर्धाको लागि कोसिस गराइरहेका त छन् नै नेपाल राज्यमा तामाङ समुदायको सहभागिताका लागि पनि जोडबल गरिरहेको देखिन्छ । यिनै उद्देश्य केन्द्रित संस्थाहरुमध्ये एक हो, तामाङ समाज उत्तर अमेरिका ।
संघीयताले काठमाडौंलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने हो भने कर्णालीलाई स्वतन्त्रता दिए हुन्छ [भिडियो अन्तर्वार्ता] स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल अबको केही महिनामा सकिँदै छ । यो साढे ४ वर्षसम्म संघीयताले नागरिकलाई फाइदा पुगेको देखिन्छ भने कति ठाउँमा सोचे अनुसारको काम हुन नसक्दा नागरिक दुखी, आक्रोसित पनि छन् । समग्रमा नेपालमा संघीयताले फाइदानै पुर्‍याएको बताउनुहुन्छ कालिकोट जिल्ला पचालझरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवाल ‘विश्वप्रकाश’ । युवा नेता सेजुवाल साढे दुई दशक नेपाली राजनीतिमा हुनुहुन्छ ।
मेरो उम्मेदवारी नरहने खबरले बाआमाहरुले आँसु बगाउनु भएको छ : तेजबहादुर तामाङ [भिडियो अन्तर्वार्ता] निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी अगाडि बढाएसँगै राजनीतिक दलहरुमा विस्तारै सक्रियता बढेको छ । पार्टी निर्माण र महाधिवेशनकै दौरानमा नेताहरुले चुनावलक्षित भाषण दिइरहेका छन् । आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ गतेका लागि सरकारसमक्ष निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रवासबाट पूर्वलडाकुको बिलौना : ...आफ्नै नेतालाई बदल्न सकिएन अवसरवादीहरु व्यक्तिगत स्वार्थमै अवसान र सीमित भए ! हामीजस्तो आमकार्यकर्ता उनको सत्ताको भर्‍याङ भए । हामीलाई उनको स्वर्गको बाटो बनाउने साधन बनाइयो । भोको पेट र पेटभरी नखाई भैंसी हिँड्ने गोरेटोजस्तो बाटोहरुमा दु:खमा किनेको कान्छी श्रीमती (बाइक) गुडाउनु गुडायो, धुलो उडाउनु उडायो ।
के हो माओवादीको महाधिवेशनले ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने विषय ? ऐतिहासिक १० वर्षे महान् जनयुद्ध गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आएको नेपालको माओवादी आन्दोलन फेरि नयाँ ढंगले छलाङ हान्ने तयारीमा छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका विभिन्न धाराहरुलाई एकता गर्दै जनयुद्धमा हाम्फलेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्व आजपर्यन्त पार्टी र मुलुकलाई हाँकिरहेको छ ।
'तमु समाज यूके र तमुधिं यूकेबीच एकताको दिन आउन सक्छ' [अन्तर्वार्ता भिडियो] भूतपूर्व गोर्खा सैनिक एवं तमु समाज यूकेका संस्थापक अध्यक्ष चित्रहादुर गुरुङ लामो समयदेखि समाजसेवामा तल्लिन हुनुहुन्छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए यूके) का सल्लाहकारसमेत रहनुभएका गुरुङले बेलायत-नेपालमा आपतविपतमा सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । तमु समाज यूके र तमुधिं यूकेको उत्थानमा अतुलनीय योगदान दिनुभएका उहाँ आफ्नो समुदाय ब्रिटिस गोर्खाहरुको समस्या समाधानका आन्दोलन र मोर्चाहरुमा पनि आर्थिक, भौतिक र नैतिक तवरले लाग्ने गर्नुहुन्छ ।
उपचार गर्न नपाई अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अब हुन्न : स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा [अन्तर्वार्ता] नेपालमा भेरोसेल लगाएका ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई सरकारले अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । अतिरिक्त मात्रासँगै सरकारले ‘बुष्टर डोज’ लगाउने तयारीसमेत गरेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइसकेपछि मात्रा सरकारले सबै नागरिकलाई ‘बुष्टर डोज’ लगाउने तयारी गरेको छ ।
पार्टीको काम निष्ठापूर्वक गरी आएको छु, यसपालि महामन्त्री उठ्छु : सहमहामन्त्री डा महत डा प्रकाशशरण महत नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँदै पछिल्लो कार्यकाल सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ । संविधानसभा सदस्य उहाँले संविधान निर्माण मस्यौदा कार्यदलको सदस्यका रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ ।
'सोडाजन्य चिसो पेय पदार्थले हड्डी खियाउँछ' नेपालमा दैनिकजसो विभिन्न रोगका बिरामीहरु बढ्दै गइरहेको सरकारी/गैर सरकारी तथ्यांकअनुसार देखाएका छन् । मानिसलाई रोगी बनाउने मुख्य कारण भनेको खानपान नै हो । स्वस्थ रहन खाना स्वास्थ्यवर्दक, सफा हुनुपर्छ । तर हामीले खाँदै आएको खाने कुरा नै अस्वस्थकर भयो भने पक्कै रोगको सिकार बन्छौं ।
जनताको पहिचान समाप्त पार्ने दिशामा 'शासक वर्ग'हरु लागिरहेका छन् [भिडियोसहित] झण्डै साढे दुई दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ भानुराम थारु । पहिचान र अधिकारलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढिरहनुभएका थारुले चार वर्षदेखि नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष सम्हालिरहनुभएको छ । संसद् बाहिरको यो पार्टीले आउँदो उपनिर्वाचन, स्थानीय तह, प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने तयारी गरेको छ ।
जनगणनाबारे बुझ्नुपर्ने कुराहरू पृष्ठभूमि :- केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कार्यतालिका अनुसार प्रत्येक १०/१० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत वि.सं. २०७८ कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म गणकहरू घरघरमा पुग्दै छन् । सामान्य भाषामा जनगणना भन्नाले जन (जनता अर्थात् मानिस) लाई गणना (गन्ने) प्रक्रिया हो । तर अहिले यो सामान्य परिभाषाले मात्र जनगणना शब्दलाई बोक्दैन । किनकि जनगणनामा जन (मानिस) को सर्वाङ्गिण पक्षको पारदर्शी गणना गरेर त्यसको विस्तृत सूचना आउनु पर्दछ ।
नैतिक तथा व्यवहारिक शिक्षा, आजको अपरिहार्य जन्मेदेखि जीवनभर प्राप्त गरिने ज्ञान, सीप र प्रयोगबाट आर्जित नयाँ अनुभवहरुको संगालो नै शिक्षा हो । यो औपचारिक र अनौपचारिक दुबै ढंगबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । मानिसको पहिलो पाठशाला त घर नै हो । विद्यालयमा नियमित रुपले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने उद्देश्यले लिइने शिक्षा औपचारिक हो । समय सीमा र नियममा नबाँधिइकन जहिलेसुकै र जुनसुकै ठाउँमा प्राप्त गरिने ज्ञान, सीप र प्रयोगबाट आर्जित अनुभव अनौपचारिक शिक्षा हो । जुनसुकै माध्यम र तरिकाबाट शिक्षा आर्जन गर्न सकिन्छ जसको मूल ध्येय मानिसमा सक्षमता हासिल गराउनु हो ।
नुवाकोटमा कांग्रेसलाई एक नम्बर बनाउन नेतृत्वका लागि सक्षम छु [भिडियो अन्तर्वार्ता] नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको पछिल्लो पटक संशोधित कार्यतालिका कार्यान्वयन भएमा मंसिर १० गते जिल्ला अधिवेशन हुनेछ । केन्द्रीय अधिवेशन भने मंसिर २४, २५ र २६ गतेको लागि तय भएको छ । पार्टीभित्रको गुटबन्दी र अन्य कारणले कांग्रेस महाधिवेशन समय तालिका पटक-पटक फेरिँदै आएको छ । यद्यपि ढिलोचाँडो हुने अधिवेशनहरुका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नेताहरु निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न छलफल, बैठक, दौडधुप र आरोप-प्रत्यारोपमा रहेका छन् ।
राजनीतिक मूल्य सिक्न अष्टलक्ष्मीलाई बुझ्न पर्छ राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेर सत्ता र शक्तिमा थुप्रै पटक पुगेको एकजना ब्यक्ति हुन्-अष्टलक्ष्मी शाक्य । कयौँ पटक झन्डा हल्लाउँदै मन्त्रीको गाडीबाट ओर्लिएर सामान्य भेषभुषामा हिंड्ने, अत्यन्त सरल स्वभाव र शैली, जीवनस्तर अपनाउनु भएको, शक्ति र सत्ताभ्यासको कुनै लेस नदेखिने ब्यक्ति हुन् शाक्य ।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी कदम : '६ महिना सम्झिन्छ, ६ महिना बिर्सन्छ' नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको २०७८ साल कात्तिक ४ गते बिहानसम्मको तथ्याङ्कमा देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरो, डुबानबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या ८८ जना, बेपत्ता भएकाहरू ३० जना र घाइते भएका २२ जना भन्ने छ । यो तथ्याङ्क पूर्ण छैन । सरकारले पूर्ण क्षतिको विवरण छिटो संकलन गरी सही तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।